Owase-Ashdown eqenjini lesizwe | News24
Owase-Ashdown eqenjini lesizwe
ISITHOMBE : sithunyelweULondi Ziqubu ozodlalela elakuleli e-Namibia ngenyanga ezayo.
OWESIFAZANE osemncane wase-Ashdown ungomunye wabadlali abaqokiwe ukuba bayomela izwe lase Ningizimu Afrika ebholweni lomnqakiswano (netball) ku-U16.
ULondi Ziqubu (16) uzoba yingxenye yabadlali abayi-12 abazomela iqembu lase Ningizimu Afrika e-Namibia emidlalweni ezoqala mhla zingama-22 kuya ku-25 kuNcwaba (August).
ULondi owenza ibanga lika-Grade 10 e-Alexander High School utshele i-Echo ukuthi waqala ukudlala ibhola lomqakiswano efunda ibanga lika-Grade 6.
Uthe selokhu aqala ukulidlala akaze abheke emuva njengoba ewumdlali weqembu i-Anti quiters lakhona e-Ashdown.
Uthe : “Ukuqokwa kwami njengomunye wabadlali abazomela iNingizimu Afrika kusho lukhulu kumina.
“Ngijabulile kakhulu futhi angizange ngikholwe ngangesikhathi ngithola ukuthi ngiqokiwe. Beziningi kakhulu izingane ebezikhona futhi nazo bezidlala kahle kakhulu kodwa kwaqokwa mina. Lokho kusho lukhulu kumina.
“Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngenza konke okusemandleni ukwenza indawo engiphuma kuyona nedolobha lami ukuba liziqhenye ngami,” kubeka yena.
Umqeqeshi kaLondi eqenjini i-Anti Quiter uMnuz Zwelibanzi Mbatha uthe ujabule kakhulu.
Uthe lokhu kuyakhombisa ukuthi njengomqeqeshi umsebenzi uyenzeka futhi nabadlali bakhe bayakhombisa ukuthi bazimisele.
“Ukuqokwa kukaLondi kuza emva kokuba abambe iqhaza emncintiswaneni wokuhlungela iqembu elizoya e-Namibia. Waqala wahlungelwa iqembu lesifundazwe saKwaZulu-Natal bese bephinda behamba futhi njengeqembu lesifundazwe beyohlungelwa iqembu lesizwe,” kubeka yena.
Uthe ngokwazi kwakhe uLondi uyena kuphela umdlali oqokiwe eMgungundlovu.
“Ngisuka kude nalezi zingane naye uLondi ngibafundisa ukudlala i-netball ayi kona kuphela kodwa nokuziphatha nenhlonipho ngoba nakho kudlala indima enkulu ekuphumeleleni kwezemidlalo. ULondi ngihlezi ngimukhuthaza ukuba aqhubeke njalo angakhohlwa nalapho ephuma khona. Ngiyakholelwa ekutheni ezemidlalo zinendima enkulu eziyidlalayo ezimpilweni zezi ngane zethu ikakhulukazi endaweni yase-Ashdown.
“Indawo yethi inezinkinga zezidakamizwa ingakho
sizama ngayo yonke indlela ukuba siqoqe intsha siyifake kwezemidlalo ukuze ingagcini esizinikela ezintweni ezingalungile,” kubeka yena.